Belo Monte, Herintaona Aty Aoriana: Ny Fiantraikan’ny Tohodrano Amin’ireo Mponina manamorona Ny Renirano sy ireo Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2016 6:38 GMT
Hatramin'ny nanidiana ireo vavarano, manodidina ny valopolo isan-jaton'ny hadirin'ny Xingu no navily tamin'ny làlany voajanahary mba ho any amin'ny fantsona voatrolombelona mitondra hatrany amin'ny sinibe. Ny habetsahan'ny rano dia tsy handalo intsony hamaky an'i Volta Grande, ampahan'i Rio Xingu manakaiky ny zato kilometatra mamakivaky Faritany indizena roa, Arara da Volta Grande sy Paquiçamba, izay an'ny vahoaka Arara sy Juruna. Fianakaviana an-jatony no monina eto.
Teo anelanelan'ny febroary sy aprily 2016, nanome sazy mitentina 35.3 tapitrisa reals (manodidina ny 9.5 tapitrisa Euro) an'i Norte Energia noho ny fahafatesan'ny trondro 16,2 taonina nandritra ny famenoana ilay sinibe izay naharitra 3 volana ny Ibama.
Ny jono no tena asa fiveloman'ny Juruna, araka ny Atlas-n'ny Fiantraikan'ny Tohodranon'ni Belo Monte. Ny vokatry ny fanadihadiana fanarahamaso tsy miankina nataon'ireo Juruna, niarahana niasa tamin'ny ISA sy ny Oniversite Federalin'i Pará, dia manipika fa ny famokarana trondro vitan'ny Juruna isan-taona dia 4.469 kilao. Ny 98%-n'io vokatra io dia natokana ho an'ny fanjifany manokana raha amidy kosa ny 2% sisa. Ny trondro no manome ny 55%-n'ny sakafon’ izy ireo.